99 Indawo ye-BSF Maggot Ranch • i-Yurie BSF
Indawo ye-BSG Maggot Farm ngaphandle kwe-Smell
Ufuna ukwazi indawo yokuqeqeshwa kweMaggot kanye nendawo yepulazi le-BSF eliseduze kakhulu, elingamanje, elingenabhema e-city yakho?
Le ndlela isendaweni engenalo ikholomu idolobha lapho ukhona manje.
Bese uchofoza u-SEARCH
Bhala manje, Shayela u-Yurie BSF
Amamephu abhalwe ohlwini aluhambanga ngenxa yokulinganiselwa kobuchwepheshe bamuva.
Ukuze uthole ukuqeqeshwa kokuqeqesha sicela uxhumane no-Yurie BSF 0812-2105-2808
Indlela yokuhlakulela i-BSF Maggot
Indlela Yokuhlakulela Maggot
Indlela enhle yokuhlakulela i-Magfot BSF ukuthola intengo yokuthengisa iMaggot ixoxwa ngokugcwele kusukela ekulungiseni ama-BSF amakheji, ukuvuna i-maggot okuzenzakalelayo.
Kunezindlela eziningi zokufunda ukulimala kwe-magf ye-BSF, okuvame kakhulu ukuzihlola noma ukuzifundisa nezinye izindlela ngokuthatha ukuqeqeshwa ukulima.
Kunezindlela zokufunda ukulima kwe-Maggot BSF ngokujoyina amaqembu noma imiphakathi. Indlela ngayinye inezinzuzo zayo kanye nezinkinga zayo.
Vele ukhethe okuhamba kahle kakhulu "isitayela" sakho. Abanye kulula ukuwaqonda ngokufunda kuphela, abanye bakhetha ukufunda ngokubuka ama-tutorial videos, kanti abanye bakhetha ukuqhuba ngokuqondile epulazini.
Indlela yokuhlakulela ama-magots e-BSF nomaphi lapho wenza khona kuhle. Uma nje unelisekile ngemiphumela. futhi impela imiphumela lapha ikwazi ukuhlangabezana nezidingo zokudla kwezilwane.
Isigaba Sebhizinisi Lomgogodla
Ngemuva kokuthola umlingo, ngaphandle kokudla kwezilwane zakho okudingekayo, udayisa umlenze uma izidingo zakho zomuntu sezigcwalisiwe. Ngaphandle kwe-maggot bsf indlela yokulima, ukulima ngamagqabha nakho kuhlelwe ngokwezibalo zebhizinisi.
Ukutshalwa kweMaggot yaseKhaya
Izigaba zamabhizinisi ze-Magot zihlukaniswe zibe yizinga elingaphansi (ikhaya), izinga eliphansi kanye nezimboni. Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kungcono ukuqala esikalini esincane noma sasekhaya kuqala, ngaphandle kwenhloko-dolobha ayinzima, into ebaluleke kakhulu ukuthi uqale uqonde ukungena nokuphuma kokulima kwe-BSF maggot.
Ngenqubo emva kokulima amagoti ngokusebenzisa imijikelezo yesithathu nesine njalonjalo, ukutshalwa kwemagog kuyaba mnandi futhi kuveza imiphumela.
Yiba nesineke uma kunemijikelezo eyodwa, emibili nantathu, lapho uphakathi nokufunda, akukhuthazwa ukuba udle ithani elilodwa ngosuku uma ungatholi ikhi eyodwa ngosuku.
Kulungile ukufisa ukuba yiqiniso kodwa ulungiswe emakhono akho, impahla, izinsiza kanye nabanye abalandeli.
Uma ungumuntu othanda ukutadisha ngokwakho, sicela ulandele umhlahlandlela ophelele kusukela ekuqaleni ukuthengisa nokuthengisa i-BSF umgogodla
Umhlahlandlela Wokukhiqiza Umgogodla we-BSF
Qedela Isiqondiso Sendlela Yokuhlakulela AmaMaggots
Indlela yokucubungula i-Maggot ekufakeni kwesilwane
(I-Pasta Maggot, i-Maggot Flour, i-Maggot Pellet)
Imibuzo nezimpendulo mayelana nokuhlakulela amaMaggots
Khetha ukuziphatha okuqondile ku-Ranch
Kukhona indawo ye-99 More ye-MagF ye-BSF yanamuhla ngaphandle kwe-Smell
Kodwa uma ukhetha ukufunda ngendlela ewusizo futhi ngokushesha kukhona imiphumela. Ungafunda ngokuza ngokuqondile epulazini edolobheni eliseduze nawe. Ukhetha nje idolobha elikude ukuthi ufunde mayelana nemikhuba yokulima imifino ye-BSG yamaggot.
Ukuhlakulela amaMaggots aseMedium and Large Scale
Ukuze uqale ibhizinisi lemfuyo leMaggot eliphakathi nendawo enkulu, kufanele ulungise konke okuvuthiwe nokuhlelekile.
Ngoba ukuqala imfuyo ye-maggot esezingeni eliphansi awukwazi ukuyenza kalula futhi ngokuhlola. Ngaphezu kokuchitha isikhathi, amandla nengqondo, nakwezinye izimo eziyingozi.
Ukungasho ukuthi umthwalo wengqondo ngenxa yokuhluleka kuzoholela ekubeni ungabi nhle ngekusasa lakho. Ziziphi izinyathelo ezidinga ukutadisha futhi zibe ukukhathazeka kwethu lapho sifuna ibhizinisi le-maggot ngesilinganiso esiphakathi?
Into yokuqala okufanele uyenze ihamba ngenqubo yasesikoleni kuqala, bese uyihlakulela ikhaya noma isilinganiso esikhulu. Ukuze isipiliyoni sesipiliyoni sibe isisekelo sethu esiyisisekelo ekuthuthukiseni ibhizinisi lokulima umlenze olandelayo.
Ezinye izinto zobuchwepheshe ngaphambi kokuqala ibhizinisi okufanele sicabangele yizo:
Ukuba khona kwezinto eziyingozi, okusho ukuthi kudingeke kube ukulungelelwa kwengqondo nokulungiselela ukulungiselela okuvuthiwe ngempela ukuze ibhizinisi lokulima umlingo ongenalutho lingasebenza kahle.
Izinto okumelwe sizenze ngaphambi kokuqala ibhizinisi ziqala
Ukuzivumelanisa ukuthi ibhizinisi lokulima umlingo ngempela yisisombululo ekuthuthukiseni ngokwakho nangcono ngokwezezimali esikhathini esizayo.
Ukuqoqa inhloko yebhizinisi le-BSF lomgogodla
Dala uhlelo lwebhizinisi.
Nazi ezinye izinto ezibalulekile okudingeka zilungiswe
Uma senza ibhizinisi lomuntu siqu noma elilodwa, asikho isidingo sokuthola umlingani webhizinisi. Kodwa uma sifuna ukwakha inkampani, kufanele ube neqembu eliphumelelayo.
Qala ngokubheka abantu abangathembeka, ukusebenza ngentshiseko nendawo abantu abalungile endaweni efanele.
Gxila ekukhetheni uhlobo lwebhizinisi leMaggot
Ukukhetha okuningi ebhizinisini lokulima umlingo, ekuqaleni kokuqala kufanele uhambe ngenqubo yokukhiqiza umkhiqizo we-maggot okhiqiza izibungu eziningi futhi eziningi.
Ngesikhathi eside, qiniseka ukuthi wakha ibhizinisi lesimanje se-BSF yokulima ngaphandle kokuhogela. Enye ibhizinisi ibhizinisi nokuvikeleka nokududuzeka kokusebenza manje kwamashumi eminyaka ezayo.
Uma ukukhiqizwa komgogodla wakho kumanje kunomsoco, silungise ukuze kungabangeli izinkinga emphakathini. Abaningi abasomabhizinisi abasemagunyeni abangazange babeke phambili ukuvikeleka sebevaliwe ngenxa yemiboniso yomphakathi.
Ngemuva kokukwazi ukuhlakulela umlenze ngaphandle kokuhogela, isinyathelo esilandelayo ukugxila kuzici ezikhethekile kumabhizinisi we-maggot.
Nanka Imikhiqizo Yomkhiqizo Wezimakethe zeMaggot
Umanyolo we-Organic Liquid
- Isigaba A Umanyolo We-Organic Liquid
- Isigaba B Umanyolo we-Organic Liquid
Umanyolo oqinile we-Organic
Isigaba A Umanyolo oqinile we-Organic
Umanyolo we-Class B organic oqinile
I-BSF entsha ye-Larvae
I-Maggot Feed Feed (i-Maggot Pasta, i-Maggot Flour.
I-Agro Industry (izimonyo, ezinye izinto ezenziwe zakhiwe, Ukwakha Imfucuza Yokudla)
Ukuqeqeshwa Ukulima Kwemaggot
I-Maggot Business Consultant
Bheka Around Us
Yonke imikhiqizo namakhono ebhizinisi inethuba elihle kakhulu, bheka ukuthi zingaki ezimbonini zokudla ezifuywayo zezilwane eziseduze nawe.
Lokhu kubonisa ukuthi ubukhulu bezamabhizinisi ezondla izilwane ezisekelwe emagogini.
Khetha futhi uhlele uhlobo lwebhizinisi ofuna ukuyisebenzisa, cabanga ngokucophelela ngaphambi kokunquma. Ungasivumeli sikhethe ngokungalungile ngoba silandela.
Yiziphi imikhiqizo noma amasevisi ofuna ukunikela? Ukusabalalisa kanjani? Uyithengisa kanjani? Bangobani abantu abazoyigijima? Iyini intengo yokuthengisa ngokuncintisana? Uyithuthukisa kanjani?
Futhi ulungise indlela yokwenza umkhiqizo wokupakisha njengokukhangayo ngangokunokwenzeka emehlweni wabathengi. Hlela futhi ulungiselele ngaphambi kokuqala ibhizinisi le-maggot.
Yazi iMakethe yeMaggot (SWOT)
Yenza uphenyo futhi wenze ukuhlaziywa kwemakethe ukuthola ukuthi iyiphi ingxenye yezimakethe zakho, ikakhulukazi labo abazoba yizimakethe ezihlosiwe zebhizinisi lakho le-maggot.
Thola ukuphawula kwakho emakethe nemibono mayelana nebhizinisi le-maggot ozoqala ngalo. Futhi ababambisene nalabo abatholakali kakhulu ukulungiselela amasu ekuphumeleleni emakethe.
Ukukhetha igama lebhizinisi
Amabhizinisi ibalulekile kakhulu emisebenzini yebhizinisi. Khetha igama elilula ukulikhumbula futhi limelela umzamo we-magg we-BSF.
Capital Resources Uphi imali yakho yebhizinisi? Ingabe iphuma kumuntu oyinhloko noma i-capital capital? Uma imali oyihlelayo ayikho i-100% yemali yomuntu siqu.
Khona-ke ungaxhumana nezinsizakalo ze-ejensi ezihlinzeka ngemali efana ne:
Borrow kusuka eBhange
Borrow kusuka emndenini
Borrow kusuka kumngani
Borrow kusuka kuwe
Ukwenza Uhlelo Lwebhizinisi
Uhlelo lwebhizinisi ukuphrinta okwesibhakabhaka kwebhizinisi lakho, ukuhlela, ukudala umbono wekhampani kanye nenjongo, okwenza umgomo ofuna ukuwufeza?
Hlela uhlelo lokugqugquzela nokukhangisa kwemikhiqizo efanele yamaggot ukuba ibe yingxenye yemakethe yokudla kwezilwane njll.
Yenza uhlelo lwebhizinisi ngokucophelela, ngokucophelela ukuze ungenze kube nzima lapho uhlala khona. Ukuze ibhizinisi lakho licace ngokuqondisa kwalo nenhloso kanye nenkathi yayo yokufeza.
Ukunquma indawo yebhizinisi
Indawo yebhizinisi le-Maggot ifuna indawo eqondile. Funa izindawo ezilula ukufinyelela ezokuthutha,
Eduzane nemithombo yemvelo yemidiya kanye nokudla kwamagogane, zinezinsiza ezisekelayo eziphelele futhi kulula ukuthola umsebenzi.
Khetha abasebenzi ngokucophelela. Esinye esibalulekile ekufezeni impumelelo ukuthola abasebenzi abangakwazi ukusebenza kuphela kodwa bangathembeka.
Izinkampani eziningi ziphazamiseka ngenxa yalokho "umuntu" enkampanini echitha phansi futhi athathe ibhizinisi elihlala egameni layo.
Ukuphatha Izimvume Zebhizinisi leMaggot
Ilayisensi yebhizinisi iyisici sokufaneleka emehlweni omthetho nobufakazi bokuthi uyisakhamuzi esihle ngokukhokha intela yebhizinisi kamuva.
Ukukhiqiza ngobuchwepheshe beMaggot
Funda futhi uqonde imisebenzi yokulima yemaggot kusukela ekulungiseleleni ngokomzimba nangokwenkolo kanye nezinyathelo ezizokwenzeka esikhathini esizayo lapho lokhu kutshalwa kusebenza.
Yenza i-Cage efana ne-BSF-like
Inqolobane ye-BSF njengezindiza iqhuma lapho ihlwitha futhi ikhiqiza ukukhiqiza amaqanda amaningi.
Ukukhiqiza i-BS kuyisici esibalulekile esidingekayo ukusekela ukusebenza kahle kwezinto ze-BSF zokulima.
Ukuvalwa kwesokudla kanye ne-BSF ekhethiwe kuzokusiza ukukhiqiza amaqanda e-BSF kanye nokusiza ukugcinwa kwansuku zonke kwe-BSF, kubandakanya izindawo zokwakha ezifana nendawo yokuhlala yebutho elimnyama eligijimayo noma ibutho elimnyama lindiza.
I-BSf enclosure kumele ikwazi ukudala induduzo ye-BSF. I-Cage criteria evezwe yi-BSF:
Izinto ze-BSF zokuvala
Ubukhulu obuhle (Ubude x ububanzi x ukuphakama nokuphakama kwesigqomo se-BSF)
Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, bheka ividiyo yokufundisa ukuthi ungayenza kanjani inja lapho isosha elimnyama libaleka.
Ukuhlanzwa kwezinto zokusebenza nokulungiswa kwezixhobo
Imishini kanye nemishini ebalulekile ekusekeleni ukuqhutshwa komsebenzi wokulima. Izinsiza nemishini efana nalokhu:
Ukutholakala kwezindawo zeqanda,
Ukudla nokuphuza izindawo zezindiza ze-BSF,
Indawo yokukhulisa amagagasi,
I-egg ne-egg incubator
Indawo yokukhulisa i-BioTong izibungu
Ukuphakela nokulinywa kweMaggot Media
Enye yezinhloso eziyinhloko zokulima umgogodla ukuthola ukugcinwa kwezindleko zokudla kwezilwane kuze kufike ku-82% yezindleko eziphelele zokudla ngesikhathi sokukhiqizwa kwamabhizinisi ezinhlanzi nezinkukhu.
Ngakho-ke sebenzisa ukudla okukhululekile kanye nemidiya yamaggot njengemfucuza yasendlini, imfucuza ekhishini, imfucuza yemakethe ngendlela yemifino nezithelo.
Amanye abezindaba angaba uhlobo lwezinyosi, izimbuzi, onogwaja, amadada, izinkukhu zezikhumba zezinkukhu kanye nomquba wehhashi njll.
Okuphakelayo kanye neMidiya
Ukudla kanye nemidiya kuhlobene kakhulu nokukhula okuphezulu nokukhiqiza kwamagot nokusebenza kahle kwezindleko.
Ukudla kudlala indima enkulu ekukhuleni kwezibungu ngoba ukudla okwanele kusiza ukukhula kwezibungu ngokushesha futhi kunamafutha.
Ukuhlakulela izigubhu ze-BSF zanamuhla ngaphandle kokuhogela akulona nzima, kodwa kusadingeka ukuphathwa okufanele. Ikakhulukazi uma lokhu kutshalwa akuyona nje isilingo nesiphambeko.
I-BSF yokuqeda amaqanda angaba yinoma yiluphi uhlobo futhi ngokuvamile yenziwa ngamabhokisi amancane afana namabhasi kanye namathreyi noma ngendlela yebhokisi lesikwele.
Lapha amaqanda we-BSF ahlonywe emagotheni bese adluliselwa ku-BioTong ukukhulisa ...
Lungiselela igumbi lokuhlanza kanye neshalofu ukubeka i-tray kahle futhi kulula ukuyiqapha nokuyigcina nsuku zonke.
Ukusetshenziswa kwe-BioTong esikhaleni esiphakathi ngokuqinisekile kuhluke nesikali sasekhaya, kodwa isimiso sihlala silingana nalapho i-BioTong inomhlobo we-2, i-BioTong ngaphandle kwempambu njengendlela yokukhulisa ama-young maggots kanye ne-BioTong ngenqwaba njengethuluzi lokufuduka kwe-prepupa.
Usayizi we-BioTong uhlelwe ukutholakala komhlaba, ukuhlela kahle futhi ulungiselele uhlelo lokukhulisa futhi wengeze i-BioTong lapho izitshalo zikhula.
Ukuphatha ukuphathwa kokutholakala kokudla kanye nemidiya ye-maggot idinga ukulungiswa kahle, ngoba abezindaba basesimweni semfucuza yemvelo, umquba wezimfuyo noma umfucuza wefrijini onomkhuba wokungcolisa iphunga.